Momba anay | Qingdao Florescence Co., Ltd.
Qingdao Florescence Co., Ltd. dia mpanamboatra fantsom-pivoarana anaty manana traikefa mihoatra ny 26 taona. Ny vokatray dia misy fantsom-bozaka voajanahary voajanahary sy fantsom-bokotra ho an'ny bisikileta, môtô, fiara, fantsom-pandrosoana ary fantson'ny fingotra, koa mamokatra fantsom-panala vita amin'ny oram-panala vita amin'ny rano, fantsona mitsingevana, fantsom-panatanjahantena sns. , Mpiasa matihanina sy teknika 60 antonony sy zokiolona).
Ny vokatra Florescence dia natao, novokarina ary notsapaina isaky ny ISO9001, ary nandalo ny fisedrana CCC, CIQ, SONCAP, PAHS. Ary koa ny singa rehetra dia novokarina sy nojerena hentitra tsirairay, ireo fantsona rehetra dia hojerena miaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana mandritra ny 24 ora.
Miaraka amin'ny mpanamboatra mandroso, fitsapana ary fitaovana R&D, Florescence dia lasa mpamatsy fantsona sinoa manana tantara lava indrindra, fampandrosoana haingana indrindra, renivohitra & teknolojia be indrindra ary ireo vokatra mifaninana indrindra. Any amin'ny seranan-tsambon'i Qingdao, Florescence dia afaka mamaly amin'ny fomba mahomby izay takiana maika amin'ny fantsona anatiny sy ny tadiny miaraka amin'ireo vokatra marobe.
Ny vokatray dia atolotra any amin'ny firenena 20 mahery manerana an'izao tontolo izao, ankafizin'ny mpanjifa anatiny sy ivelany. Ankoatr'izay, nandalo ny fankatoavana ISO9001: 2008 izahay ary manana rafitra fitantanana maoderina sy siantifika ihany koa izay manome vokatra avo lenta sy serivisy tompon'andraikitra. Izahay dia mifikitra amin'ireto fotokevitra fiasa manaraka ireto hoe "Ho tafavoaka velona amin'ny trosa, hiorina amin'ny tombon-tsoa ifampizarana, hivoatra amin'ny ezaka iraisana, handrosoana amin'ny fanavaozana" ary hikatsahana ny fitsipiky ny kalitaon'ny "Zero Defect". Manantena mafy izahay ny hametraka fifandraisana mandresy fandresena miaraka aminao mifototra amin'ny vokatra tsara sy serivisy tonga lafatra hahatratrarana tombontsoa sy fampandrosoana iraisana!